कुन–कुन रोग वा समस्याका लागि उपयोगी बासी रोटी ? - ज्ञानविज्ञान
यदि तपाइँ उच्च रक्तचाप वा ब्लडप्रेसरबाट पीडित हुनुहुन्छ भने बासी रोटी खानु धेरै फाइदादायक हुन्छ । यसका लागि बिहान सबेरै चिसो दुधसँग बासी रोटी खानुपर्ने हुन्छ ।
यसो गर्नाले बढेको रक्तचाप सन्तुलनमा ल्याउन सहयोग गर्छ ।
लामो समयसम्म भोको बस्नाले कहिलेकाहीं पेटमा ग्याँस वा एसिडिटी बढ्न गर्इ समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ । त्यही एसिडिटीकै कारण तनाव एवं सुगर जस्ता रोगको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ ।
त्यसैले यदि तपाइँ बिहान बासी रोटी दुधसँग खाने गर्नुहुन्छ भने ग्यास्ट्रिकको समस्या त हट्छ नै, साथसाथै सुगर पनि नियन्त्रण गर्दछ ।
मैदाको रोटी र पास्ताले हुन सक्छ मानसिक समस्या जानिराखाैँ
सोयाबीन चाट तयार भयो ।
Don't Miss it गर्मीमा अनुहारलाई यसरी सुन्दर बनाउनुहोस्
Up Next स्मरण शक्ति बढाउने प्राकृतिक उपाय यस्ता छन्
के खाने र के नखाने पत्थरी भएमा ? जान्नुहोस् पत्थरी सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण जानकारी !
मुत्र प्रणाली अन्तर्गत मिर्गौला, पिसाबनली र पिसाब थैलीको पत्थरीको समस्या लिएर पिसाब सम्बन्धी शल्यक्रिया विभागमा आउने बिरामीको संख्या उल्लेख्य छ…
दूषित पानी र बासी, सडेगलेको खानाले झाडापखाला लाग्छ । विशेषगरी गर्मी समयमा यसका ब्याक्टेरिया सक्रिय हुन थाल्छन् । तर, चिसो…